La Réunion, Kenya, i Mozambika izay hifanome tanana, hifanampy hitady vahaolana miaraka hahafahana mitandro ny filaminana aty amin’ny faritry ny ranomasimbe indianina. Manampy amin’ny fanazaran-tena an-dranomasina izay tanterahana eto Madagasikara nanomboka omaly hatramin’ny 16 novambra izao ny firenena amerikanina. Hanamafisana ny traikefa entina hiarovana ny sisin-dranomasina izao fanazarantena izao, hoy i Michael Peter Pelletier, masoivoho Amerikanina monina sy miasa eto amintsika. Nilaza ny masoivoho amerikanina fa manohana ny fitondram-panjakana malagasy izy ireo amin’ny famerenana sy fanitsiana ny rafitry ny filaminana « réforme du secteur de ,la sécurité ». Eo koa ny fanampiana amin’ny fandriampahalemana an-dranomùasina.